Zviitiko paApp Store zvichavepo svondo rinouya | IPhone nhau
Zviitiko paApp Store zvichavepo svondo rinouya
Rimwe remabasa akaburitswa neApple mune yekupedzisira WWDC 2021 mukati mezvinhu zvitsva zveIOS 15 uye iPadOS 15, uye izvo apfuura pasina kurwadziwa kana mbiri pakati pevashandisi, Ndiro rutsigiro urwo vagadziri vanofanirwa kugadzira zviitiko zvekushandisa kwavo.
Aya mashandiro anotanga kuwanikwa kubva Chitatu Gumiguru 27 Uye kubva zvino zvichienda mberi, vanogadzira vanoda kutanga kuishandisa vanogona ikozvino kuronga zviitiko zvavo kuburikidza neApp Store Connect.
Apple yaita chiziviso ichi kuburikidza newebhusaiti iyo Apple inoita kuti iwanikwe kunharaunda yekuvandudza. Zviitiko mukati meApp Store zvinotendera vanogadzira kusimudzira makwikwi, nhepfenyuro dzepamoyo, mafirimu ekutanga, zviitiko zvakakosha… Kune vashandisi vasati vatozviita, dhawunirodha uye edza iyo application.
Kutanga svondo rinouya, zviitiko zvako zvemu-app zvinogona kuwanikwa zvakananga paApp Store, zvichikupa nzira nyowani yekuratidza zviitiko zvako uye kuwedzera kusvika kwako. Iye zvino unogona kugadzira zviitiko kubva kuapp muApp Store Batanidza uye kuronga kuti zvioneke muApp Store. Zviitiko izvi zvinouya panguva, zvakaita semakwikwi emitambo, mabhaisikopo ekutanga, uye zviitiko zvinotepfenyurwa, zvinogona kukurudzira vanhu kuti vaedze app yako, kupa vashandisi varipo nzira nyowani dzekunakidzwa neapp yako, uye kupa vashandisi vekare zvikonzero zvekudzoka. Zviitiko zvichaonekwa muApp Store pane iOS 15 uye iPadOS 15 kutanga Gumiguru 27, 2021
Zviitiko zviri mukushandisa zvinoratidzwa mumakadhi ezviitiko muApp Store izvo zvinosanganisira mifananidzo kana vhidhiyo, zita rechiitiko uye tsananguro pfupi.
Chete paIOS 15 uye iPadOS 15
Apple yakaedza kuita uku yapfuura Nyamavhuvhu mune betas yeIOS 15 uye iPadOS 15, kuti ubvise gare gare. Aya makadhi anozongowanikwa mushanduro yegumi neshanu yeIOS neiPadOS uye haazowanikwe kubva kune dzakapfuura shanduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Zviitiko paApp Store zvichavepo svondo rinouya
Mark Gurman anoti hakuzove nechiitiko cheApple munaNovember
Sekureva kwaBloomberg, kushomeka kwezvinhu zvinokanganisa kota yaifanirwa kuve rekodhi yeApple